Maxaa ka jira masuq maasuqa laga sheegayo Maamulka degmada Jowhar ee xarunta Gobolka Sh/dhexe? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaa ka jira masuq maasuqa laga sheegayo Maamulka degmada Jowhar ee xarunta...
Maxaa ka jira masuq maasuqa laga sheegayo Maamulka degmada Jowhar ee xarunta Gobolka Sh/dhexe?
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha Maaliyada Maamulka degmada Jowhar Ismaaciil Warsame Faarax “Webi” ayaa sheegay in canshuurta laga ururiyo magaalada Jowhar aan loo isticmaalin sidii loogu talogalay balse la musuqmaasuqo.
Shir jaraa’id oo uu xafiiskiisa ku qabtay guddoomiye ku xigeenka degmada Jowhar ayuu ku sheegay in magaalada Jowhar lacagaha ay xaqa u lahayd in lagu horumariyo isla markaana lagu dayactiro wadooyinkeeda looguna adeego bulshada ay dad jeebabka ku shubtaan dano gaar ahna ku adeegsadaan.
Hase yeeshee guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Jowhar ayaan magacaabin shaqsiyaadka ku takri fala lacagaha canshuurta ee laga ururiyo suuqyada magaalada Jowhar.
Guddoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyada Degmada Jowhar Ismaaciil Warsame ayaa ugu baaqay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle inay baaraan halka ay lacagaha canshuurta ah ee la soo ururiyo ay ku dambeeyeen.
“Waxa dadka laga qaado waa in dadka lagu celiyo intaas ayaa muhiim ah,waana kala hadlay una sheegay guddoomiyaha degmada Jowhar,guddoomiyaha gobolka,Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo guddiga Maaliyada Baarlamaanka wax jawaab ahna kama haayo.”
Dhowaan ayaa maamulka Hirshabelle waxa uu ku dhowaaqay in uu la wareegay lacagaha canshuuraha ee laga soo ururiyo magaalooyinka hoos yimaada maamulka Hirshabelle.
Waa markii ugu horeysay mas’uul ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe oo ka hadla musuqmaasuq lagu sameeyo lacagaha canshuuraha ee ka soo xerooda magaalada Jowhar.